नेकपा नेता वीरजङ्गलाई अदालतबाटै गिरफ्तार, भोजपुर पुर्याइयो – www.janabato.com
नेकपा नेता वीरजङ्गलाई अदालतबाटै गिरफ्तार, भोजपुर पुर्याइयो
१७ श्रावण २०७७, शनिबार ०५:३२ August 1, 2020 Janabato Online
साउन १६, बुटवल । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन पोलिटब्युरो सदस्य चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजङ्ग’ लाई अदालतले रिहाइको आदेश दिए पनि प्रहरीले पुनः गिरफ्तार गरेको छ । नेता वीरजङ्गलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले बिहीबार सिलिन्डर बम विस्फोटको मुद्दामा सफाइ दिएको थियो ।
जिल्ला अदालत दाङ देउखुरीले नेता वीरजङ्गलाई रिहा गरेलगत्तै प्रहरीले सङ्गठित अपराधको मुद्दा लगाई काभ्रेको बनेपामा राखेको थियो । उक्त मुद्दामा पनि जिल्ला अदालतले रिहाइको आदेश दिएपछि नेता वीरजङ्गलाई अर्को मुद्दा लगाई भोजपुर लगिएको समाचार प्राप्त भएको छ । सङ्गठित अपराधको मुद्दामा प्रहरीले वीरजङ्गलाई भोजपुर लगेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त मुद्दामा अधिवक्ताहरू कपिलचन्द्र पोखरेल, कान्तिराम ढुङ्गाना, देवकुमार मोक्तान र रामकृष्ण भण्डारीले बहस गरेका थिए ।
← उत्पादनमा बृद्धि गरी आत्भनिर्भर बन्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य खड्का
पहिरोको वितण्डा : गुल्मीमा पहिरोले च्यापेर ४ जनाको मृत्यु →
मेक्सिकोमा शक्तिशाली भूकम्प, १४० को मृत्यु दर्जनौं उद्दार जारी
४ आश्विन २०७४, बुधबार ०९:३२ Janabato Online Comments Off on मेक्सिकोमा शक्तिशाली भूकम्प, १४० को मृत्यु दर्जनौं उद्दार जारी
‘एसिया–प्यासिफिक’ को नाम किन फेर्दैछ अमेरिका ? बेइजिङ ओर्लनुअघि के भने ट्रम्पले ?
१९ कार्तिक २०७४, आईतवार ०८:१२ Janabato Online Comments Off on ‘एसिया–प्यासिफिक’ को नाम किन फेर्दैछ अमेरिका ? बेइजिङ ओर्लनुअघि के भने ट्रम्पले ?
दशैँ, चाडपर्वहरू र ‘क्रान्तिकारीहरु’
१२ आश्विन २०७४, बिहीबार ०२:४४ Janabato Online Comments Off on दशैँ, चाडपर्वहरू र ‘क्रान्तिकारीहरु’